एक महिनामा ४३ प्रतिशतले घटे अस्पताल भर्ना हुने कोरोनाका सिकिस्त बिरामी :: Setopati
विवेक राई काठमाडौं, असार ९
अस्पताल भर्ना हुने कोरोना संक्रमणका सिकिस्त बिरामीको संख्या ४३ प्रतिशतले घटेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत जेठ १ गते देशभर एक हजार ३ सय ३१ जना संक्रमित आइसियूमा रहेकोमा असार ८ गते जम्मा ७ सय ६१ जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत छन्।
आइसियूमा उपचाररत ७६१ संक्रमितमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा ११६, प्रदेश नम्बर २ मा ३५, बागमतीमा ४३४, गण्डकीमा ३९, लुम्बिनीमा ५९, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २२ जना छन्। जेठको अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण विस्तारै कम हुँदै गएपछि अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीको चाप पनि घट्दै गएको हो।
उपत्यकाकै हकमा पनि अहिले अस्पतालका आइसियू बेड खाली हुँदै गएका छन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको १६ अस्पतालको तथ्यांक अनुसार अहिले २ सय ६ आइसियू बेड खाली छन्। जम्मा ४ सय २७ आइसियू क्षमता रहेका ती अस्पतालमा अहिले २ सय २१ जना संक्रमित उपचाररत छन्।
साथै,अहिले सरकारी अस्पतालमा समेत संक्रमितको चाप घट्न थालेको छ। जसका कारण मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ।
हिजो (मंगलबार) सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले हिजैबाट लागू हुने गरी निजी अस्पताललाई कोभिडको नि:शुल्क उपचार गर्ने सूचीबाट हटाइएको र अब सरकारी अस्पतालले मात्र संक्रमितको उपचार गरेबापत मन्त्रालयबाट रकम बुझ्न पाउने जनाएको छ। अबदेखि भने सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले मात्र संक्रमितको उपचार गरेबापत भुक्तानी दाबी गर्न पाउने भनिएको छ।
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले अहिले संक्रमण कम भइरहेको भन्दै यहीँ बेलामा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बताए।
टेकु अस्पतालमा पनि सिकिस्त संक्रमितको चाप घटेको भन्दै डा. राजभण्डारीले भने, 'अहिलेको अवस्था भनेको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थालेको हो। तर संक्रमणलाई यही बेला व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने फेरि बढ्न सक्छ र नियन्त्रणमा आउन लामो समय लाग्न सक्छ।'
उनले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण कम हुँदै गए पनि गाउँघरमा भने संक्रमण फैलिँदै गएकाले जोखिम हटिनसकेको बताए।
अहिले एउटै गाउँठाउँमा धेरै जनामा संक्रमण देखिएको भन्दै उनले तत्काल स्थानीय तहहरूले आवश्यक रोकथाम र नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाए।
'उपत्यकामा संक्रमण कम भएको हो तर कतिपय ठाउँमा अझै जोखिम छ। संक्रमण गाउँघरमा देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले नियन्त्रणको अगुवाइ गर्नुपर्यो।'
यद्यपि अहिलेको अवस्थामा संक्रमणबाट बच्ने उच्चतम उपाय भनेको खोप नै रहेको भन्दै डा. राजभण्डारीले सरकारले यथाशक्य चाँडो खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'फेरि संक्रमणको तेस्रो लहर आउँछ भनेर मान्छेलाई तर्साइरहेको स्थिति छ। उक्त लहरले बालबालिकादेखि सबै उमेर समूहलाई आक्रमण गर्छ भनिएको छ। त्यसैले संक्रमणबाट बच्ने भनेको खोप नै हो,' उनले भने।
अस्पतालमा सिकिस्त संक्रमितको चाप घटेसँगै सरकारले देशभर निषेधाज्ञालाई समेत जेठ ८ गतेबाट खुकुलो बनाएको छ। उपत्यकामा समेत अहिले जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी निजी सवारीसाधनलाई चल्न दिइएको छ भने पसलहरू निश्चित समय तोकेर खुलाइएको छ।
सरकारले संक्रमण दरको अवस्था र अस्पतालमा संक्रमितहरूको चापलाई आधार मानेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने भनेको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक सातायता संक्रमण दर औसत २० प्रतिशत छ भने अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप पनि आधा कम भएको छ।
अहिले धेरै अस्पतालहरूमा मध्यम लक्षण भएका संक्रमितहरूका लागि छुट्याइएको बेड खाली छन् भने आइसियूमा पनि बिस्तारै चाप घट्दै गएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ९, २०७८, १६:५३:००